China Bar-Type In-Ear Bluetooth earphone Kugadzira uye Fekitori |Roman
Bata control kuti ishandiswe nyore
Digital kuratidza simba rebhatiri
Mode: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/BATTERY STATE MONITOR
Nguva yeMumhanzi: dzinenge 5H
Nguva Yekutaura: inenge 6H
Kuchaja bhokisi bhatiri: 300 mAh, headset bhatiri: 40mAh
Bar-Type In-Ear Design.
Tekinoroji yeTWS inosunungura zvachose mahedhifoni ekuruboshwe nekurudyi kubva kumatambudziko ewaya.Kuruboshwe nekurudyi zvinogona kushandiswa zvakasiyana kana pamwechete, zvichikutendera iwe kunakidzwa neiyo yechokwadi isina waya chiitiko.
Smart switching pakati peanoshanda uye akamira ehedhifoni.
Bluetooth 5.0 otomatiki Pairing & Kubata Kudzora: Uchishandisa yazvino Bluetooth 5.0 tekinoroji, batanidza otomatiki mushure mekuvhura chivharo chemunzeve.Kubata kutonga kunogona nyore kuwana vhoriyamu +/-, ridza inotevera / yapfuura rwiyo, pindura / kuramba mafoni uye mamwe mabasa.Inoshanda nevabatsiri - Inoenderana neIOS uye Android, uye inotsigira kuwana Siri uye Google Mubatsiri.
Inotakurika Charge Case & Yakagadzikana uye Yakagadzikana: inotakurika yekuchaja kesi, iri nyore kutakura, inogona kuzadzisa zvese zvaunoda zvezuva nezuva nekuchaja mahedhifoni ako eBluetooth chero nguva uye chero kupi, nakidzwa nemimhanzi yako zuva rese.Kana mahedhifoni asina waya akaiswa mucheji yekuchaja, anogona kubhadhariswa otomatiki.Yakareruka uye ergonomic dhizaini, uye huya ne 3 pairi Mazano emitambo (muhukuru S/M/L) anopa yakasununguka uye yakachengeteka kukwana.
Battery Display uye Wireless Kuchaja Kukurumidza Kuchaja]: Unogona kuona mashandisiro ebhatiri eBluetooth isina waya mahedhifoni uye yekuchaja kesi nyore neiyo smart LED dhijitari kuratidza.Iyo earbuds yekuchaja kesi inotsigira isina waya yekuchaja.
300mAh yebhokisi rekuchaja uye 40mAh yemahedhifoni.
Zvakapfuura: Sport Leather Chokwadi Wireless Earbuds
Zvinotevera: Wireless Earbuds, Wireless Power Bank Kuchaja Nyaya
Bluetooth Headset Ine Mic, Munzeve Earphone, Noise Kanzura Earbuds, Wireless Bluetooth Earphone, Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Bluetooth Mono Headset,